Hoggaamiyihii ururka Al-qaacida ee Bariga Afrika Fasul Cabdalla oo lagu dilay Muqdisho. – Radio Daljir
Hoggaamiyihii ururka Al-qaacida ee Bariga Afrika Fasul Cabdalla oo lagu dilay Muqdisho.
Muqdisho, June, 11 – Sida ay sheegtay xogyaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykan Hillery Clinton oo hadashay caawa waxaa habeenkii talaadada lagu dilay magaalada Muqdisho Fasul Cabdalla Max?ed oo ahaa hoggaamiyihii ururka Al-qaacida ee Bariga Afrika.
Warkan oo ilaa maanta la isla dhexmarayey ayaa lagu daabacay jaraa?idka Daily Nation ee ka soo baxa dalka Kenya, kaas oo soo xiganaya saraakiil Somali ah oo jooga magaalada Muqdisho.
Fasul Cabdalla iyo nin kale oo Somali ah balse haysta dhalashada dalka Kanada ayaa la sheegay inay ku khaldameed Jid ay fadhiyeen ciidamada dawladda ka dibna halkaasi rasaas la isku waydaarsday taasi oo keentay inay halkaasi ku dhintaan.
Ururka Al-shabaab ayaa si kulul u beeniyey warkaasi, laakiin warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee AFP oo soo xiganaysa sarkaal ka tirsan Al-shabaab ayaa sheegtay inuu dhintay Fasul Cabdalla oo Maraykanku madaxiisa dul dhigay $5 Million oo dollar.
Fasul Cabdalla oo la aaminsan yahay inuu ahaa maskaxdii ka dambaysay weeradii lagu qaaday safaaradahii Maraykanka Kenya iyo Tanzania ayaa haddii ay rumowdo inuu dhintay waxay dharbaaxo kale ku tahay ururka Al-qaacida oo hoggaamiyehoodii lagu dilay Pakistaan 2-dii bishii May ee Sanadkan.